Samee emayl saaxiibtinimo leh | Martech Zone
Talaado, Oktoobar 18, 2011 Arbacada, Oktoobar 26, 2011 Adam Yar
Dhammaan isbeddelada internetka ayaa tilmaamaya kobaca weyn ee imisa emayl lagu akhriyo aaladaha moobaylka. Xogta qaarkood waxay muujiyeen in 40% dhammaan emayllada shirkadaha lagu akhriyo aaladda moobaylka. 6-dii bilood ee la soo dhaafay, akhrinta emaylka ku jira aaladda gacanta waxay kor u kacaysaa 150%! Eegista emayllada shaashad yar ayaa leh dhib iyo faa'iidooyin. Aaladaha qaar waxay taageeraan HTML, qaar kamida sawirada xamuul ahaan, qaarkood waxay leeyihiin qoraal horudhac ah oo la heli karo kahor furitaanka emaylka, qaarna waxay si toos ah u cabiridoonaan balaca emaylka, badankooduna waxay cabiridoonaan noocyada si ay u aqrin karaan.
Litmus ayaa ku siisay macluumaadkan macluumaad aad u macluumaad badan oo ku saabsan sida loogu hagaajiyo naqshadeynta emaylkaaga aaladda moobaylka. Infographic wuxuu qeexayaa walxo muhiim u ah abuurista nashqadaha shaqeynaya iyo dhibaatooyinka ku dhaca waxqabadka. Maaddaama aan ku dhow nahay xilligii ciidaha, waa tixgelin muhiim ah marka tafaariiqlayaashu ay diraan emayllo… macaamiil badan ayaa akhrin doona markay wax iibsanayaan! Ma awoodi doonaan inay akhriyaan taada?
Tani sifiican baa loo qabtay, waan daabacay oo miiskeyga ayaan ku haystaa oo badanaa waan tixraacayaa. Aad baad ugu mahadsantahay soo saarida tan.
Dadka waawayn ee http://www.litmus.com mudan mutaysashada, Norma!